LinkedIn အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（169.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် LinkedIn: Jobs & Business News
Swelcom ပညာရှင်များ! အလုပ်များကိုရှာဖွေပါအကြီးဆုံးလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်အွန်လိုင်းအလုပ်များဈေးကွက်တစ်ခုနှင့်အွန်လိုင်းအလုပ်များဈေးကွက်, အဆိုးဝါးဆုံးကွန်ယက်နှင့်စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း။ သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်း, စီးပွားရေးသတင်းများကိုလိုက်နာပါ။ သင်၏အလုပ်ကိုစတင်ရှာဖွေပါ။ သင်အိမ်မှအလုပ်လုပ်သည့်အခါသင်၏အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာရှိမှုမှပါ0င်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့်အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာရှိမှုမှရှာဖွေပါ။
အချိန်ပိုင်း, အလွတ်, ဝေးလံခေါင်သီသောအလုပ်များငှားရမ်းခြင်းနှင့်အကြားရှိအရာအားလုံး - အကြားရှိအရာအားလုံးကိုသင် LinkedIn နှင့်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။ LinkedIn ၏လူသန်းပေါင်းများစွာသည်စီးပွားရေးပညာရှင်များ၏လူထုအသိုင်းအဝိုင်းသည်မှန်ကန်သောဆက်သွယ်မှုများနှင့်မှန်ကန်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကိုရှာဖွေရန်ကူညီနိုင်သည်။
LinkedIn သည်အကြီးဆုံးလူမှုကွန်ယက်အက်ပလီကေးရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်များကွန်ယက်ကိုကြီးထွားပါ, နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုဇုန်သတင်းများကိုရယူပါ။ ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူယနေ့အထိနေပါ, LinkedIn ကသင်အလုပ်တစ်ခုရှာရန်သို့မဟုတ်အချိန်ပြည့်အသက်မွေး0မ်းကျောင်းအဖြစ်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုကြီးထွားရန်သို့မဟုတ်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတိုးပွားစေရန်သင်စကားပြောဆိုမှုများကိုစတင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုချက်ချင်းရယူပါ။ လစာ, ကုမ္ပဏီအရွယ်အစားနှင့်အလုပ်တာဝန်များအပေါ်စီးပွားရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖိုင်းကိုသင်၏လျှောက်လွှာကိုရိုက်နှက်ခြင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်အနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုလုံခြုံစွာလိုက်နာပါ။
အလုပ်များရှာဖွေခြင်း, အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း, စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်များကိုရှာဖွေခြင်း, LinkedIn နှင့်အတူသင်၏နောက်အလုပ်အတွက်!
- အလုပ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်း - ရာထူးကိုရှာဖွေခြင်း, သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကိုက်ညီခြင်း, လစာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူပါ သင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်း, CV, CV သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - သင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်နောက်ဆုံးအသင်းများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နေထိုင်ခြင်း
အလုပ်ရှာဖွေသူများ - သုတေသနကုမ္ပဏီများ နှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
Business News: သက်ဆိုင်ရာသတင်းများ - သင်၏နေ့စဉ် Rundown မှတစ်ဆင့်သင့်အားစာဖြင့်ပို့ပေးပါ။ သင်၏ပရိုဖိုင်ကို ဖန်တီး. သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုရယူပါ။
LinkedInIn app features:
Busi Busi နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများမှ News Desporting နှင့် The Integress & Centrations တို့တွင်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများကိုကြည့်ပါ။ > • LinkedIn မှသင်လုပ်မည့်ဆက်သွယ်မှုအသစ်များမှတစ်ဆင့်အလုပ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။ •အလုပ်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာများကိုရှာဖွေပါ။ သင့်ရဲ့ area ရိယာဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးတဲ့အွန်လိုင်းအလုပ်တွေမှာမင်းကိုအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ •ယောဘလစာအသေးစိတ်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ,
•သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်သင်၏အလုပ်ကိုမြှင့်တင်ရန် Leveledin ၏လူမှုကွန်ယက်ကိရိယာများ•အဖွဲ့ဝင်များအတွက်အကြီးဆုံးလူမှုကွန်ယက်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Globe
သည်သင်၏ကွန်ယက်ကိုပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်သင်၏ကွန်ယက်ကိုကြီးထွားရန်အမြန် & လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုအတွက်အဆက်အသွယ်များကိုတင်သွင်းပါ Ocial အက်ပလီကေးရှင်းများပါ0င်သည်။ အဆက်အသွယ်အသစ်များနှင့်အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ •ကုမ္ပဏီများ, သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပညာရှင်များကိုလိုက်နာပါ။ •စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လူမှုရေးကွန်ရက် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လူမှုရေးကွန်ရက် - အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေရန်သင်၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကိုပြသသည်။ အလုပ်များငှားရမ်းခြင်း - သင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်းကို အသုံးပြု. သင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်းကို အသုံးပြု. အလုပ်လျှောက်ထားပါ။ အလုပ်သစ်ကိုရှာဖွေနေပါသလား စီးပွားရေးကွန်ရက်လား Business News နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း Buzz? သင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်သို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်ပါစေ LinkedIn သည်လွယ်ကူစွာရှာဖွေခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
LinkedIn ကိုအသုံးချလိုပါသလား။ သီးသန့်ကိရိယာများအတွက်ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းခြင်းသို့အဆင့်မြှင့်ပါ။
ဒီအက်ပ်ကိုသုံးတဲ့အခါခွင့်ပြုချက်အနည်းငယ်တောင်းခံပါတယ် ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့: http://linkd.in/1l0s8yz
Hhh hello how are you
Ko kyaw zin